01/09/2021 - ALANZAYAR
ကလေးငယ်လေးအား မုန့်ဝယ်ကျွေးရန် ပိုက်ဆံမရှိသောကြောင့် ဆံပင်များဖြတ်၍ ရောင်းခဲ့သော မိခင်
ကလေးငယ်လေးအား မုန့်ဝယ်ကျွေးရန် ပိုက်ဆံမရှိသောကြောင့် ဆံပင်များဖြတ်၍ ရောင်းခဲ့သော မိခင် မိဘတိုင်းက သူတို့ကိုယ်တိုင်သာ မစားရမသောက်ရပဲ အငတ်ခံနိုင်သော်လည်း သားသမီးများကျ စားချင်တာမှန်သမျှ မရှိသည့်ကြားက အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီး ဝယ်ကျွေးတတ်ကြသည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ဗီယက်နမ်မှ မိခင်တစ်ဦးသည် ကလေးငယ်လေးအား ဝမ်းစာဖြည့် မုန့်ပဲသရေစာများ ဝယ်ကျွေးရန် ပိုက်ဆံမရှိသောကြောင့် အနှစ်နှစ် အလလ […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းသာကျန်ရှိတော့တဲ့ ခဲသတ္တုပြားမိုး ရှေးဟောင်းသာသနိကအဆောက်အဦး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းသာကျန်ရှိတော့တဲ့ ခဲသတ္တုပြားမိုး ရှေးဟောင်းသာသနိကအဆောက်အဦး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း အထူးဒေသ (၄)၊ မိုင်းလားမြို့၊ဟိုမိန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ ကိုက် (၅၀) အလွန် တောင်ပေါ်သို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်အတက် (၂) နာရီခန့်ကြာသော် တောတွင်းနေရာမှာတည်ရှိသော ဝပ်နှောင်လုံရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။ ရှမ်းအရှေ့ဒေသတောအတွင်း အရောက်ပေါက်နည်းပြီး သွားလာရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာ အရမ်းကိုခန်းနားထည်ဝါပြီး မြို့တွင်းကလို ပြုပြင်မှုတွေအစားထိုးမှုတွေ သိပ်မပြုလုပ်တဲ့အတွက် ရှေးလက်ရာအတိုင်း […]
စကစတွေ ယုတ်မာပြီ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ ကလေးသုံးဦးကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က စကစ က ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း…. ကလေးသုံးဦးမှာ အသက် ၁၇၊ ၁၃၊ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကလေးများဖြစ်ကြောင်း…. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို စကစတွေ ယုတ်မာပြီ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ […]
သတ္တဝါတွေရဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရှားရှားပါးပါး သစ်သီးများ
သတ္တဝါတွေရဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရှားရှားပါးပါး သစ်သီးများ စတော်ဘယ်ရီ လိပ်ပြာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးက လိပ်ပြာပုံစံလေး ဖြစ်နေတာပါနော်။ ချစ်စရာလေးပါ။ ခါကြက်ဥ စက်ရုပ် အောက်ကပုံလေးကတော့ ခါကြက်ဥပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ခါကြက်ဥပုံလေးကတော့ စက်ရုပ်ပုံလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ ပုံစံလေးပါနော်။ အာလူးကြွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေးကတော့ အာလူးသီးလေးပါ။ […]
မြန်မြန်သေချင်ပြီလို့ တဖွဖွပြောနေရှာတဲ့ အသက် (၁၀၀)ကျော် အဘွားအိုတစ်ဦး၏ ရင်နှင့်စရာ ဘဝ
မြန်မြန်သေချင်ပြီလို့ တဖွဖွပြောနေရှာတဲ့ အသက် (၁၀၀)ကျော် အဘွားအိုတစ်ဦး၏ ရင်နှင့်စရာ ဘဝ ဒီလိုအခြေအနေမှာ တချို့လူငယ်လေးတွေကတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြသလို တချို့လူငယ်လေးတွေလည်း တောထဲဝင်ပြီး စစ်ပညာလေ့ကျင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေက အဲ့ဒီရွာကအဘွားအိုတစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကို ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။အဘွားအိုက အသက် (၁၀၂)နှစ်အရွယ်ရှိနေပေမယ့် ကျန်းမာသွက်လက်နေဆဲလို့သိရပါတယ်။ အဘွားရဲ့နာမည်က ယာလွယ်ဟိန်းဖြစ်ပြီး […]
Time City မှာ အမိုက်စား ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့တဲ့ လူကြမ်း မင်းမင်း နဲ့ သမီးလေး ဇင်စန္ဒာထွန်း
Time City မှာ အမိုက်စား ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့တဲ့ လူကြမ်း မင်းမင်း နဲ့ သမီးလေး ဇင်စန္ဒာထွန်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လူကြမ်းမင်းသား မင်းမင်းကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ သူကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလိုမှာ လူကြမ်းအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြမ်းနေရာကနေလည်း ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
အမျိုးသားများ အားကျရသည့် ဗိုက်ကြွက်သားအလှ 6-packs အား ပိုင်ဆိုင်ထားသော မိန်းကလေး
အမျိုးသားများ အားကျရသည့် ဗိုက်ကြွက်သားအလှ 6-packs အား ပိုင်ဆိုင်ထားသော မိန်းကလေး ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်ပုံကို အမျိုးသားများ သာမက အမျိုးသမီးများပါ စိတ်ဝင်စားကြပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ် ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရုရှားနိုင်ငံမှ Natalya Kuznetsova အမည်ရှိ အသက် ၃၀နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးသည် အလေးချိန် ၄၀ကီလိုဂရမ်ရှိခဲ့သော […]
အသက်ကြီးမှ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သက်ကြီးစုံတွဲ
အသက်ကြီးမှ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သက်ကြီးစုံတွဲ Songkhla ခရိုင်၊ Saba Yoi ကျေးရွာမှာ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ အသစ်စက်စက် စုံတွဲလေးရဲ့ ရယ်စရာကောင်းမှုနဲ့ ချစ်စရာကောင်းမှုတို့ကို ဖန်တီးတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုပါ ။ Ms. Wilai Mooksitchinda အမည်ရှိ အသက် […]
သားအမိနှစ်ယောက် ထမင်းလက်ဆုံစားနေရာကနေ ခုလို့ကိုယ့်သားလေးဖြစ်သွားတော့ မိခင်ကြီးရင်ကွဲရပြီပေါ့……
သားအမိနှစ်ယောက် ထမင်းလက်ဆုံစားနေရာကနေ ခုလို့ကိုယ့်သားလေးဖြစ်သွားတော့ မိခင်ကြီးရင်ကွဲရပြီပေါ့…… စမ်း/မြောက်မှာ ဖမ်းဆီးနေတယ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာ စမ်း/တောင်က သားအမိနှစ်ယောက်က ထမင်းလက်ဆုံစားပြီး စကားတွေပြောနေကြတယ်။ ရုတ်တရက် လမ်းထဲကိုကားတွေတလကြမ်းမောင်းဝင်လာတယ်။ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ကားတံခါးတွေပိတ်ပြီးတော့ တိုက်တွေကိုသေနတ်နဲ့ချိန်တယ်။ “အထဲကိုဝင် မစပ်စုနဲ့ပစ်ထည့်လိုက်မယ်”ဆိုတဲ့ချိန်းခြောက်သံတွေ ဆူညံသွားတဲ့လမ်း….လှေကားကိုရိုက်ဖျက် စာရွက်ကိုကြည့်ပြီး အခန်းထဲကိုဇွတ်အတင်းဝင်သံတွေကို တလမ်းလုံးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နားထောင်နေရတယ်။ ငါ့ကိုများလား ..ငါ့မိသားစုကိုများလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကတယောက်လက်ကို တယောက်ဆုပ်ကိုင်လို့ […]
၀မ်းသာစရာသတင်းလာပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် တပ်မဟာအားလုံး ထိုးစစ်ဆင်ခံနေရ…. စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး သေဆုံး…. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်….ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို ၀မ်းသာစရာသတင်းလာပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် တပ်မဟာအားလုံး ထိုးစစ်ဆင်ခံနေရ…. စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး သေဆုံး…. အပြည့်အစုံကို အောက်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်….ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို ၀မ်းသာစရာသတင်းလာပြီ ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် တပ်မဟာအားလုံး […]